Reseta 25 mora indrindra amin'ny SingleCare - Orinasa | Desambra 2021
Fialam-Boly News Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Vaovao Fiaraha-Monina, Fahasalamana Orinasa, Vaovao Wellness Mpanao Gazety Pets Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina, Fanabeazana Ara-Pahasalamana Vaovao, Wellness Zava-Mahadomelina Vs. Namana Fiaraha-Monina Orinasa, Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina Lalao Community, Company
Tena >> Orinasa >> Ny fitsaboana 25 mora indrindra amin'ny SingleCare
Ny lafo vidy any Etazonia dia lafo. Izy ireo dia mahatratra 12% amin'ny fandaniam-pahasalamana rehetra ary manodidina ny $ ny vidin'ny isan-trano 1,200 isan-taona —Ary isan-taona dia miakatra hatrany ny vidim-panafody. Amin'ny 2019 fotsiny, araka ny tatitra iray , ny mpamokatra zava-mahadomelina dia nampiakatra ny vidiny amin'ny 6% eo ho eo.
Efa ho 70% an'ny olon-dehibe any Etazonia dia nandray fanafody tamin'ny volana lasa. Raha lazaina amin'ny teny hafa, io Rx lafo io dia fandaniana tsy azo ihodivirana ho an'ny fianakaviana manerana ny firenena - iray izay mbola sarotra kokoa noho ny tsy fahazoana antoka ara-bola ateraky ny areti-mandringana COVID-19.
Iraka ataon'ny SingleCare ny hanao ireo fitsaboana ilainao hahatsapa ho mora vidy kokoa, hoy Ramzi Yacoub, Pharm.D., Tompon'andraikitra voalohany amin'ny fivarotam-panafody ao amin'ny SingleCare. Ny karatra fitehirizam-panafody anay dia nanampy ny olona hamonjy amina miliara amin'ny fanafody prescription, ka hitentina amina dolara vitsivitsy fotsiny ny vidin'ny famandrihana maro.
Ny zava-mahadomelina voalaza 25 mora indrindra amin'ny SingleCare
Raha manontany tena ianao hoe iza amin'ireo fitsaboana no naka toerana voalohany, dia izao no fanafody Rx mora indrindra. *
Rx anarana Makà tapakila
1. Loratadine Makà tapakila
2. Amoxicillin Makà tapakila
3. Prednisone Makà tapakila
4. RepHresh Makà tapakila
5. Gavilyte-c Makà tapakila
5. Hydroxyzine pamoate Makà tapakila
7. Hydrocortisone Makà tapakila
8. Floranex Makà tapakila
9. viscous Lidocaine Makà tapakila
10. Chlorhexidine gluconate Makà tapakila
11. Meclizine Hcl Makà tapakila
12. Denta 5000 Plus Makà tapakila
13. V-C Mahery Makà tapakila
14. Cyanocobalamin Makà tapakila
15. Levobunolol Hcl Makà tapakila
16. Aspercreme Lidocaine Max Hery Makà tapakila
17. Klor-con / EF Makà tapakila
18. ADC / Fluorida Makà tapakila
19. Phenazopyridine hydrochloride Makà tapakila
20. sulfadiazine volafotsy Makà tapakila
21. Lactinex Makà tapakila
22. Triamcinolone acetonide Makà tapakila
23. Nizoral A-D Makà tapakila
24. Hibiclens Makà tapakila
25. Niacin maimaim-poana Makà tapakila
* Miorina amin'ny angona SingleCare hatramin'ny Jona 2020. Miovaova arakaraka ny fivarotam-panafody fivarotana ny vidiny, ary mety hiova.
Ny zava-mahadomelina 25 mora indrindra misy amin'ny tapakila SingleCare dia mitsabo aretina mitaiza sy mitaiza isan-karazany ao anatin'izany ny allergy, ny fahasalaman'ny vehivavy, ny fahasalaman'ny nify ary ny fanaintainana.
Fanamaivanana ny allergy
Raha efa niainanao ny maso mangidihidy, mievina, ary aretin'andoha, izay manetsika ny alergie, dia fantatrao fa zava-dehibe ny mahita fanamaivanana amin'ny soritr'aretina. Ny antihistamine marina dia afaka manampy anao hampijanona ny fijaliana ary hiverina amin'ny fiainana ara-dalàna - ary amin'ny tahiry SingleCare dia tsy mila mandoa denaria kely izany.
Loratadine no anarana mahazatra an'ny Claritin, antihistamine mahazatra ampiasaina hitsaboana ny fiasan'ny allergy. Misy amin'ny over-the-counter (OTC) sy amin'ny hery-preseta io. Ny mety tsy fantatry ny olona dia ny ahafahanao mampiasa SingleCare hitsaboana fitsaboana OTC — mila miantso an-telefaona fotsiny aloha ianao amin'ny mpitsabo anao, hoy i Shaili Gandhi, Pharm.D., Filoha lefitra misahana ny formulary ao amin'ny SingleCare. Midika izany, raha mampihena ny soritr'aretinao ny fatrany ambany, dia mbola afaka manangom-bola amin'ny tapakila SingleCare ianao.
Mifandraika: Azoko atao ve ny mampiasa karatra fitehirizana dokotera ho an'ny fanafody tsy lafo?
Hydroxyzine pamoate no safidy mahazatra an'ny marika Vistaril. Toy ny loratadine, ny hydroxyzine pamoate dia antihistamine. Ny fanafody dia misy vokany mampitony ihany koa - ka afaka mitsabo vetivety ny fitaintainanana sy ny fihenjanana, na manampy anao hahatsapa ho milamina mialoha na aorian'ny fomba fitsaboana.
Prednisone dia steroid mahazatra mahazatra entina am-bava ary ampiasaina hitsaboana karazan'aretina isan-karazany, ao anatin'izany ny aretin-tratra, ny tosi-dra, ny fivontosana, ny allergy ary ny aretin-ketra. Toy ny ankamaroan'ny zava-mahadomelina amin'ity lisitra ity, ny prednisone dia matetika voatendry miaraka amin'ireo fanafody, fomba fanao na fepetra lafo vidy hafa - koa ny fitehirizana vola amin'ity fitsaboana ity dia mbola sarobidy kokoa.
Triamcinolone acetonide dia safidy mahazatra an'ny Nasacort. Azo alaina toy ny tsifotra orona na crème steroidal. Ny famafazana dia manamaivana ny fivontosan'ny oronao amin'ny alàlan'ny allergy. Ny endrika topical dia matetika ampiasaina hanamaivanana ny fivontosana sy ny tsy fahazoana aina amin'ny hoditra mifandraika amin'ny olana ara-dermatolojika ao anatin'izany ny psoriasis, ny eczema ary ny fihetsika mahazaka.
Rehefa marary ianao, ny zavatra farany tianao ahiahina dia ny vidiny avo amin'ny fanafody ilainao hahatsapa ho tsara kokoa. SingleCare dia afaka manampy anao hitahiry an'ity fitsaboana lehibe ity.
Amoxicillin dia antibiotika fatra voatendry matetika— In-54,8 tapitrisa tamin'ny 2015 fotsiny, hoy ny CDC. Antony iray mahatonga izany ny hoe satria ny Amoxicillin dia mitsabo karazan-karazan-bakteria maro karazana, toy ny aretin-tratra urinary, tonsillitis, bronchitis, ary aretin-tsofina na tenda. Azo antoka ho an'ny ankizy izy io, ary mandaitra amin'ny fitsaboana ireo aretina mahazatra ireo.
Ny tahiry SingleCare dia afaka manampy amin'ny fanamorana ny fikarakarana vehivavy amin'ny teti-bolanao.Ity fitsaboana fanafody tsy fandanjana bakteria ity dia mety latsaky ny $ 5 ny fatra amin'ny fivarotam-panafody sasany.
RepHresh dia andiam-bokin'ny fikarakarana fivaviana amin'ny anarana marika, anisan'izany ny gel fivaviana, probiotic pro-B, Clean Balance, ary tsifotra fanamaivanana. Tsy misy programa fanampiana fanampiana fandoavam-bola ho an'ny RepHresh, ary tsy misy generic misy ankehitriny. Soa ihany, ny karatra fihenam-bidy tokana SingleCare dia mahatonga ity lisitry ny vokatra mifandanja pH ity ho mora vidy.
Enina amby valo- isan-jaton'ny Amerikanina no mandray fanampim-panafody multivitamin na mineraly tokana. Mety ho lafo izy ireo. Ny sasany dia mety mitentina $ 50 amin'ny tavoahangy tokana. Raha mandray azy ireo isan'andro ianao, dia miakatra haingana izany… raha tsy mampiasa SingleCare ianao. Aza hadino ny mifanakalo hevitra momba ny vokatra voajanahary miaraka amin'ny mpitsabo anao na ny apotisinao alohan'ny handraisanao azy ireo raha misy ny fifandraisana.
V-C Mahery dia multivitamin iray ampiasaina hanaterana vitamina sy mineraly amin'ny vatana izay mety tsy ampy noho ny sakafo, aretina, fitondrana vohoka, olana amin'ny fandevonan-kanina, na fanafody. Ny sakafo mahavelona dia singa iray tena ilaina amin'ny fitazonana ny fahasalamana sy ny fahasalamana amin'ny ankapobeny. Ankoatry ny mampihena ny loza mety hitranga amin'ny aretina mitaiza ary manatsara ny fahasalamana ara-tsaina , ny sakafo ara-dalàna dia afaka mametra ny vidin'ny fitsaboana ho avy. Soa ihany, ity multivitamin ity dia iray amin'ireo fanafody mora indrindra misy amin'ny carte SingleCare!
Ankoatry ny multivitamins, SingleCare dia manome fihenam-bidy lehibe ihany koa amin'ny fitsaboana ireo tsy fahampiana vitamina manokana. Cyanocobalamin dia endrika vitamina B-12 synthetic, vitamina iray tompon'andraikitra amin'ny famokaran'ny sela sela mena. Cyanocobalamin dia matetika natokana ho an'ny marary tsy ampy anemia noho ny tsy fahampian'ny vitamina B-12.
Ireo mpampiasa SingleCare dia afaka mitsitsy ihany koa amin'ny fanampiana ara-pahasalamana mandevon-kanina. Floranex dia probiotic izay manampy amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny fandanjana voajanahary ny bakteria ao amin'ny làlam-pandevonan-kanina. Misy asidra lactobacillus acidophilus izay heverina fa manampy amin'ny fikorontanan'ny tummy toy ny tsinay malemy.
Raha tsy anao i Floranex dia manontania momba ny farmasinao ianao Lactinex . Tahaka an'i Floranex, Lactinex koa dia manolotra io bakteria tsara ilain'ny vatanao io. Ny lactobacillus ao anatiny dia mety hanamaivana olana isan-karazany amin'ny fandevonan-kanina, ao anatin'izany ny fivalanana, ny aretin'ny bakteria, ny fivontosan'ny tsinay (IBS), ary ny tsy fandeferan'ny lactose.
Tsy ny zava-mahadomelina kely indrindra eto amin'ity lisitra ity dia generika. Klor-Con / EF , na Klor-Effervecent, dia famenon-marika ampiasaina amin'ny fitsaboana ny tsy fahampian'ny potasioma, na hypokalemia. Ny potasioma dia singa simika ilaina amin'ny fitazonana ny fahasalamana ara-batana. Ny olona mijaly amin'ny hypokalemia dia matetika miaina cramping hozatra, havizanana, ary / na fitempon'ny fo tsy ara-dalàna. Na dia tsy misy safidy fanafody mahazatra aza any Etazonia ho an'i Klor-Con / EF, dia mijanona ho marika marika mora foana miaraka amin'ny karatra fihenam-bidy tokana SingleCare.
Niacin dia vitamina B izay afaka manampy amin'ny fampidinana ny kolesterola na fisorohana aretina aretim-po. Ho an'ny sasany, izy io dia mety hisy vokany tsy mahazo aina, toy ny flashes mafana, ny mangidihidy na ny fikosehana ny hoditra. Ny endrika maimaim-poana amin'ny flush dia manampy amin'ny famongorana ireo, fa mety hampihena ny fihenan'ny kolesterola. Ity famenon-tsakafo ity dia mety hisy fiatraikany mahasoa ho an'ireo olona manana olana mivezivezy, toy ny aretin'i Raynaud, ary manampy amin'ny fanitarana ny lalan-dra izay mametra ny fikorianana.
Fahasalamana sy fahadiovan'ny nify
Ity misy antony hitsiky! SingleCare dia manome tahiry amin'ny areti-nify, fanasana vava ary fanamaivanana fanaintainana ilainao hitandrina ny vavanao ho sambatra sy ho salama.
Denta 5000 Plus dia fanafody nify resahina matetika izay ampiasain'ny mpitsabo nify amin'ny marary manana nify mora tohina mba hahafahana manala fotony sy hanamafisana ny enamel nify ary hanamboatra ny fahasimban'ny nify. Na dia maro aza ireo orinasa fiantohana ara-pahasalamana no tsy misoratra momba an'io fanafody io, ny Denta 5000 Plus dia mora kokoa amin'ny teti-bola rehefa mampiasa SingleCare ianao mba hitazomana ny fahasalamana am-bava sy ny fahadiovana.
Ampiasaina matetika rehefa manana olana am-bava ianao, gluconate chlorhexidine dia ranon-tsavony antiseptika ampiasaina hanalana bakteria amin'ny vava sy ambonin'ny hoditra. Matetika izy io dia voatendry hitsaboana endrika gingivitis malefaka, nefa azo ampiasaina ihany koa mba hisorohana ny aretina aorian'ny fizotran-nify na fandidiana am-bava. Tahaka ny ankamaroan'ny zava-mahadomelina amin'ity lisitra ity, ny Chlorhexidine Gluconate dia generika iray izay mety ho soloina soloina amin'ny solo-bava amina am-bava.
Lidocaine viscous dia mpanala ny fanaintainan'ny rano ampiasaina amin'ny fitsaboana ny fery amin'ny vava sy ny tsy fahatokisan-tenda. Matetika izy io dia voatendry aorian'ny fandidiana nify na fomba hafa lafo vidy. Na dia mety tsy mahazo aina aza ny olana amin'ny vava sy ny tenda, dia tsy tokony ho izany no fanalana ny fanaintainanao!
ADC / Fluorida
Fitambarana vy, vitamina ary fluoride, ADC / Fluorida dia ampiasaina hitsaboana ny nify; izy io dia omena voalohany indrindra ny zazakely sy ny ankizy kely mba samy hitsaboana sy hisorohana ny olana ara-pahasalamana nify. Araka ny nasehon'ity lisitra ity, ireo akora ilaina rehetra ireo dia singa ilaina amin'ny saina salama, vatana ary nify. Tsy mbola kely loatra ianao dia manomboka mikarakara ny fahasalamanao.
Fanamaivanana ny fanaintainana
Mety hamela fanaintainana sy fanaintainana tsy voatsabo ianao mba hisorohana ny faktiora lafo be eo amin'ny fivarotam-panafody. Aza! Miaraka amin'ny SingleCare, ireto safidy fanamaivanana roa ireto dia mora amin'ny poketrao.
Aspercreme lidocaine hery lehibe
Toy ny sasany amin'ireo famenon-tsakafo ao amin'ity lisitra ity, Aspercreme Max Hery dia fanafody nentim-paharazana amin'ny fomba nentim-paharazana. Betsaka ny olona tsy mahalala fa ny vokatra lafo dia lafo toy ity menaka manala fanaintainana ity dia azo vidiana amin'ny fihenam-bidy amin'ny alàlan'ny dokotera sy ny karatra SingleCare. Raha hitanao fa mila crème fanamaivanana ny fanaintainana ianao dia anontanio ny dokoteranao raha toa ka mety aminao ny dokotera hahazoana hery matanjaka indrindra Aspercreme Lidocaine — ary matokia fa tsy handiso ny teti-bolanao izany.
Phenazopyridine , ny generic an'ny Pyridium, dia fanafody manala ny fanaintainana mifandraika amin'ny aretin'ny urinary tract (UTIs). Satria mety mila antibiotika koa ianao hanasitranana UTI, ny vidin'ny fikarakarana aretina toy izany dia mety hitombo haingana. Soa ihany ho an'ireo mpampiasa SingleCare, ny vidin'ity fampifangaroana zava-mahadomelina ity dia mety ho zavatra kely tsy tokony hatahorana.
Na manaikitra ny bibikely, na manosotra, na may - rehefa voatohintohina ny hoditrao dia mila fanamaivanana haingana ianao avy amin'io fahatsapana tsy mahazo aina io. Amin'ny fitahirizan-tsoa io zavatra tsara io, dia afaka mihazakazaka mankany amin'ny fivarotam-panafody ianao mba hahazoana fitsaboana ASAP, tsy manahy ny amin'ny fandaniam-bola be loatra.
Hydrocortisone dia steroid novokarina voajanahary ao anatin'ny vatana. Hydrocortisone ankapobeny dia azo alaina amin'ny alàlan'ny fanafody amin'ny takelaka sy menaka. Raha raisina am-bava dia afaka mitsabo toe-javatra isan-karazany, ao anatin'izany ny aretin-tratra, ny homamiadana ary ny aretin-tsaina sy ny hery fiarovan'ny vatana. Ny dikan-teny misy azy dia ampiasaina indrindra amin'ny fikolokoloana ny hoditra - mba hampihenana ny fivontosana sy ny mangidihidy. Amin'ny karatra SingleCare dia tsy mila maminavina ny vidiny ianao.
Sulfadiazine volafotsy dia crème antibiotika na gel ampiasaina hitsaboana fahamaizana mafy sy ratra amin'ny hoditra hafa amin'ny aretina mikraoba. Raha maro ny orinasa fiantohana manarona Silver Sulfadiazine, miaraka amin'ny SingleCare ny vidin'ity fanafody ity dia mety ho ambany noho ny an'ny copay fiantohana anao aza. Aza mandoa vola be - angataho ny mpivarinao mba hampitahanao ny copay fiantohana anao miaraka amin'ny fihenam-bidy SingleCare hahazoana antoka fa mahazo ny tahiry tsara indrindra ianao.
Hibiclens dia vahaolana antiseptika izay mamono otrikaretina rehefa mifandray. Apetaka ambony amin'ny hoditra io, indrindra amin'ny fanadiovana ny ratra sy ny fikikisana na ny fikolokoloana ny ratra aorian'ny fandidiana. Aorian'ny fomba fitsaboana lafo vidy, ny zavatra farany tadiavinao dia ny fandaniana hafa. Miaraka amin'ny SingleCare, mora kokoa ity savony misy bakteria ity.
Ny fanafody farany lafo indrindra mihena amin'ny fitsaboana isan-karazany. Na miomana amin'ny fomba fitsaboana ianao, na miaina miaraka amin'ny glaucoma, ny SingleCare dia voasaronao.
Gavilyte-C dia fanafody laxative resahina ampiasaina hanadiovana ny zanatany alohan'ny colonoscopy na barium enema. Ny Gavilyte-C dia misy electrolytes hitazomana ny vatana mandritra ny dianao. Rehefa miomana amin'ny colonoscopy ianao, ny zavatra farany tadiavinao dia ny manome ny vidin'ny mpanadio ny zanatanao. Ny tahiry azo avy amin'ny karatra fihenam-bidy SingleCare dia afaka manamaivana ny sainao alohan'ny fanadinana mandreraka.
Raha mijaly amin'ny aretim-pihetsiketsehana ianao dia mety nifanena tamin'ity fanafody mahazatra ity. Meclizine HCL dia antiemetic, fanafody manakana ny maloiloy sy mandoa. Betsaka ny zava-mahadomelina marary marika mandeha, toy ny Antivert sy Dramamine. Amin'ny SingleCare anefa, ny meclizine no fomba mahomby indrindra amin'ny fivezivezena arak'izay azo atao!
Levobunolol HCL dia beta-blocker mahazatra ampiasaina amin'ny fitsaboana glaukoma. Ity takelaka natao ity dia avy amin'ny vongan-dranomaso, ary miasa amin'ny alàlan'ny fanakanana ireo mpitsabo ao amin'ny maso izay mahatonga ny famelezana vaskola mifandray amin'ny glaoma. Miankina amin'ny fivarotam-panafody, ny mpampiasa karatra SingleCare dia afaka manangona hatramin'ny 80% amin'ny vidin'ny vola levobunolol HCL.
AD Nizoral dia shampoo an'ny dandruff misy ketoconazole hanamaivanana ny loha mangidihidy sy malefaka ateraky ny toe-javatra. Rehefa manasa ny volonao isan'andro ianao mba hanandrana manasitrana ilay aretina, dia afaka mandeha haingana ilay savony mihinana fanafody. Ny tahiry SingleCare dia ahafahana miverina amin'ny hidy mahasalama nefa tsy mandany sombin-javatra fanovana be loatra.
Ahoana ny fomba hanombohana mitahiry amin'ny vidin'ny preseta
Mikaroha ny anaran'ny zava-mahadomelina sy ny kaody zip amin'ny tranokalanay na amin'ny finday. Ho hitanao ny farmasia eto an-toerana izay manana vidiny ambany indrindra ho an'ny fanafody fitsaboana anao. Ento any amin'ny fivarotam-panafody mpandray anjara ny karatra fihenam-bidy omen'ny fanafody anao mba hahazoana fihenam-bidy amin'ny vidin'ny fivarotana zava-mahadomelina. Mpiara-miasa SingleCare miaraka amin'ny farmasia an'arivony ao anatin'izany ny CVS, Walmart, Kroger, ary Walgreens. Ampitahao amin'ny copay anao amin'ny fiantohana na Medicare ity fihenam-bidy ity hahazoana antoka fa hahazo ny vidiny tsara indrindra ianao. Avereno ity dingana ity ho an'ny fanafody rehetra ataon'ny fianakavianao. Vakio ity lahatsoratra ity ho an'ny fomba bebe kokoa hahazoana meds mora vidy.
Cefdinir vs. amoxicillin: fahasamihafana, fitoviana ary iza no tsara kokoa aminao
ireo karazana ra samy hafa sy ny dikan'izy ireo
miasa drafitra b afaka 2 herinandro
inona no mety hiteraka fitsapana follicle volo diso tsara
firy ny fatotra dulcolax fivalanana tokony ho raisiko
ahoana no ahalalako ny drafitra b
mety ve ny misotro ibuprofen misy alikaola